माहानायक प्रकरण : दिपाश्री निरौलाको बहिरियो यस्तो सोच्नै नसकिन तितो स’त्य भिडियो बाहिरियो ! – Life Nepali
पछिल्लो केही समय यता नेपाली सिने उधोगमा ईतिहासमै नभएको आरोपप्रत्यारोपका कुराले अब सिनेमा उधोगको बाटो कता ? भन्ने प्रश्न सिर्जना गरेको छ । लकडाउनमा बर्षा राउत देखि पुजा शर्मा, सुष्मा कार्की, दिपक राज गिरि, साम्राज्ञी राज्य लक्ष्मी शाह, दिपाश्री निरौला सम्म विवादको भुमरिमा फसे । अन्तत दिपाश्री निरौला डिप्रेशनमा समेत पुगेकी छन् । यो कुराको जानकारी निर्माता अशोक शर्माले गराएका छन् । उनले फेसबुकमा एक स्ट्याटस लेख्दै यो बताएका हुन ।
उनले सुशान्तको उदाहरण दिदै त्यस्तो कुनै कदम नचाल, हामी सबै तिम्रो साथमा छौ भनि डिप्रेसनमा पुगेका निरौलाको घर जाँदै गरेको पनि लेखेका छन् । यस्तै उनले यसको जिम्मेवारी त्यो अन्तरबार्ता लिने, अश्लिल कमेन्ट गर्ने, अश्लिल ट्रोल र टिकटक बनाउनेहरुले लिनुपर्ने लेखेका छन् ।दिपालाई केही हुनबाट बचाउन सबै कलाकर्मीहरु संबेदनसिल हुन समेत उनले आग्रह गरेका छन् । पछिल्लो समय दिपा रजतपट अन्कल नामक एक कार्यक्रममा लिएको अन्तरबार्ताका कारण विवादत बनेकि थिइन् ।
प्रकाश सुवेदीले लिएको त्यस अन्तरबार्तामा उनले राजेश हमाल महानायक हैनन भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति दिएपछी उनको चर्को बिरोध भएको थियो । अन्ततः उनले माफी पनि मागिन । सेलाउने क्रममा रहेको बिषय दिपक राज गिरिले ‘चटपटे अन्तरबार्ता बहिस्कार गरौ’ र ‘जबर्जस्ति महानायक बनाउनेहरुलाई धन्यवाद’ भन्दै लेखेको स्ट्याटसका कारण विवाद झनै उत्कर्समा पुग्यो । भिडियो हेर्नुहोस”
Previous भोलि असार २५ देखि ४ दिनसम्म यो वर्षकै धेरै पानी पर्ने, सतर्क रहन आग्रह”
Next भारतीय मिडियालाई रमेश प्रसाइको कडा चेताबनी, च्यानल बन्द गरेकोमा खुशी गोर्खा आर्मीलाई यस्तो भने